Spundge: Mmekọrịta Ọdịnaya Mmekọrịta maka Ndị Otu | Martech Zone
Spundge: Mmekọrịta Ọdịnaya Mmekọrịta maka Otu
Saturday, July 13, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Gbasaa na-eme ka ọ dị mfe ịgbaso ozi kachasị mma, ịgbagha ihe ọmụma, ịmepụta echiche ndị na-akpali akpali, na ịmepụta ọdịnaya nwere mmetụta. Ha nwere ma mbipute nweere onwe ha na ụdịdị ọkachamara nke nyiwe ha. Gbasara PRO bụ usoro ikpo okwu nke na-enyere ndị otu na ndị mmadụ aka ịchọpụta, ịkọwapụta, mepụta ma kesaa ndị na-etinye aka, ọdịnaya nwere mmetụta.
Spundge-enye gị ohere:
track - Soro ọdịnaya kachasị dị mma, nke a haziri nke ọma n'ime Akwụkwọ Ndetu site na isiokwu, mmemme, ndị mmadụ ma ọ bụ usoro ọ bụla dabara na mkpa gị. Mgbakwunye ihe nchọgharị nke Spundge ga-atụ aro akwụkwọ ndetu kachasị mma maka amaokwu ị chọpụtara na ntanetị.
Iyo - Isi mmalite niile gbakọtara n’ime Spundge Notebooks dị ka otu ezigbo oge edere ederede dị mkpa. Gbalịa nke a otu oge, ị ga-amata oge ole ọ na-azọpụta.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - Akwụkwọ ndetu nke Spundge bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-enye gị ohere ịmụ ihe yana site n'aka ndị nkwado nwere oke mmasi. Ndị na-eso ụzọ na ndị nyere aka na-enweta nchịkọta nke ọdịnaya nke ndị otu lekọtara, na-edebe onye ọ bụla na mmekọrịta.
Ghọta uru dị n'iji ngwụcha ngwụsị nke emebere na ndị okike, ndị mbipụta na ndị na-ere ahịa n'uche maka atụmatụ na uru ndị dị na mbipụta ọkachamara ha:
Mmekorita Ike - Spundge PRO ndị ọrụ nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ iji rụkọta akụkọ na Akụkọ na Akwụkwọ Ndetu. Nke a na - enyere gị aka ịmekọrịta drafts, fanye okwu na ndozi, lelee mmezigharị na soro usoro.
Ọdịnaya Ọdịnaya Ọkachamara - Spundge PRO ọrụ na-erite uru site na-eto eto ma họrọ ndepụta nke ọdịnaya Firehoses wuru karịsịa maka ndị ọkachamara. Chọta ezigbo foto maka edemede gị ma ọ bụ ederede zuru oke iji bipụta ya, na ntanetị ole na ole, yana ihe niile dị n'ime otu arụmọrụ zuru ezu.
Nzuzo - Debe nyocha na ọdịnaya gị niile n'otu ebe, nchekwa ma dịkwa mma. Akwụkwọ ndetu gị na Spundge PRO na akụkọ nwere ike ime ka ọ bụrụ nkeonwe maka ịnweta ndị ọrụ nchekwa, ma ọ bụ maka anya gị naanị.
Mmepụta Ihe - Spundge PRO na-enye gị nchịkọta akụkọ ọdịnaya nke na-ahapụ gị ngwa ngwa ịdọrọ ma dobe tweets echekwara, onyonyo, obere vidiyo, ihe ngosi mmekọrịta na vidiyo ozugbo n'ime akụkọ gị. Ọ na-enye ozugbo, ịdị mfe nnweta njikọ echekwara yana nyocha na Akwụkwọ ndekọ ihe ka ị na-ede ihe.
Nkọwapụta Smart - Spundge na - akpaghị aka na - agbakwunye nwekọrita mgbe idetuo na mado ma ọ bụ dọrọ na dobe ihe na ndetu. Ọ na-ebute ibu URL mgbe ị jikọtara na ọdịnaya dị na mpụga. Spundge bụ oru oma, ụkpụrụ, na netiquette enyi na enyi.
Njikọ Ọkụ - Dee na Spundge, bipụta ebe ọ bụla. A pụrụ idekọ akụkọ ndị edepụtara na Spundge n'otu ntabi anya iji bipụta ya na CMS dịka WordPress, ma ọ bụ dịka akwụkwọ ozi email site na MailChimp. I nwekwara ike ide ma dezie tweets na Facebook mmelite n'otu oge. Dee otu ugboro, tinyezie ọdịnaya ebe ọ chọrọ ịga.
Embeding na Nchịkọta - A pụkwara itinye akụkọ akụkọ Spundge na weebụsaịtị ọ bụla. Nke a na-enye nhọrọ ọzọ iji kesaa ma bipụta ọdịnaya dị mfe. Nkwado dị n'ime maka Google Analytics na-ahapụ gị ịgbaso ọdịnaya gị.
Push Mmelite - Ndị ọrụ pro na-erite uru site na mmelite ọsọ ọsọ na akwụkwọ ndetu na akụkọ agbakwunyere. A na-agbanye mgbanwe na ezigbo oge ebe niile ọdịnaya gị.
Omenala Sources - Nwee ndepụta nkeonwe ma ọ bụ API ị chọrọ inwe ike na Notebooks? Spundge PRO ọrụ nwere ike mfe tinye omenala ọmụma isi mmalite. Nke a na-akwadebe otu gị otu ụzọ dị mma iji lelee wires, lelee ebe nchekwa dị n'ime na ịnweta ọdụ data. Anyị ga-enyere gị aka ịtọlite ​​n'oge na-adịghị anya.
PS: Kedu ihe nwere nnukwu nnụnụ dị na vidiyo ahụ?
Tags: Attributionnchịkọta ọdịnayammekorita ọdịnayanchịkọta ọdịnayantinye ọdịnayanzacha ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaọdịnaya ọdịnayanchịkọta ọdịnayapush mmelitengagharịmmmmmmmmmmmmm
Etu esi abanye na onye na - eme ihe ike, Blogger ma ọ bụ onye nta akụkọ